विजुली रिक्सा चलाउने निर्मला |
विजुली रिक्सा चलाउने निर्मला
प्रकाशित मिति :2016-05-11 12:11:08
नवलपरासी । ‘हजुरले नै हो रिक्सा चलाउने ? यात्रुले प्रश्न गर्थे । म सहजै जवाफ दिन्थेँ । मैले नै चलाउछु , बस्नु न कहाँ जाने हो ?
कोही हाँस्थे , कोही एकछिन अलमल पर्थे अनि भन्थे ल हिड्नुस न त जाउँ । कोही भने सँगै रोकिराखेको पुरुष रिक्सा चालकलाई सोध्न पुग्थे । कोही महिला भएर पनि रिक्सा चलाउनु भएको है ! कति हिम्मतवाली हजुर त भनेर हौसला दिन्थे ।
कावासोतीमा विद्युतीय रिक्सा चलाउने निर्मलाले आफ्ना शुरुका दिन सम्झेर यसरी मनका भाव व्यक्त गरिन् । ‘आफूलाई समस्या परेपछि जे पनि गर्न आँट आउँदो रहेछ , यो पुरुषले यो महिलाले गर्ने काम भनेर सोचिने रहेनछ’
निर्मलाले भन्छिन् ।
नवलपरासी कावासोती २ शान्तिटोल निवासी ३३ वर्षकी निर्मला तिमिल्सिनाले कावासोतीमा विद्यूतीय रिक्सा चलाउन थालेको एक वर्ष भयो । उनले चलाउने रिक्सा अहिले कावासोतीको गल्लीगल्लीमा दौडिरहन्छ ।
निर्मलाले यसअघि एउटा चकलेट कारखानामा काम गरिन्, तर त्यसबाट खान पुगेन । अनि रिक्सा चलाउन सुरु गरेकी हुन् ।
उनी भन्छिन्, ‘व्यवसाय गरुँ, लगानी गर्ने पैसा थिएन । मेरो अवस्थालाई बुझेर सृजनशील सहकारी संस्थाले रिक्सा किन्न ऋण दिएपछि रिक्सा किनेर चलाउन थालेकी हुँ ।’
कामको खोजीमा थिइन् उनी । एकदिन कावासोती कै सृजनशिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले विद्युतीय रिक्सा किनिदिने प्रस्ताव उनलाई गर्‍यो ।
‘संस्थाका व्यवस्थापक उषा घिमिरेले एक्कासी रिक्सा चलाउनुहुन्छ ? हामी तपाईलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउँछौ भन्नुभयो एकछिन त केही बोल्नै सकिनँ, तर सोचें, किन नचलाउने आँटेपछि त सकिहालिन्छ नि जस्तो लाग्यो र हुन्छ भनें । २ दिनसम्म रिक्सा चलाउन सिके र तेश्रो दिनबाट चलाउन शुरु गरें’ उनले स्मरण गरिन् ।
अहिले उनी दैनिक एक हजारदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छिन् । हाटबजार लाग्ने दिन त अझ धेरै नै हुन्छ । एक हजार रुपैयाँ दैनिक बचत गर्ने गरेको उनी बताउँछिन् । उनको यो पेसाले अहिले घरको आर्थिक अवस्थामा केही सुधार आएको छ ।
उनले सुरुका दिन सम्झिन्, ‘केही दिन त निकै दुःख भयो । म एकल महिला, अनि माईत बसेको । त्यसैमाथि रिक्सा चलाउन थालेपछि त समाजका कतिपयले हेयको दृष्टिले हेरे । मनमा धेरै चोट पुग्थ्यो, तरपनि आफ्नो छोराको भविष्य, घरपरिवारको बाध्यतालाई सम्झिएर नडग्मगाइ त्यस्ता कुराको पर्वाह नगरी कामलाई निरन्तरता दिएँ ।’
यो काम गर्न उनलाई वुवा हौंसला थपे । उनको रिक्सा विहान १० बजेसम्म र साँझ ४ बजेपछि वुवाले चलाउने गरेका छन् ।
उनकी आमा रोगी छन् । त्यसैले उनले विहानबेलुका घरधन्दा भ्याउनुपर्छ । त्यसले गर्दा यो समयमा वुवाको साथले उनलाई केही सहज भएको छ ।
‘पुरुषहरू उठ्नेवित्तिकै फुत्त काममा निस्कन सक्छन्, तर हामी जति बोले पनि घरधन्दाले छोड्दैन’ उनी भन्छिन् ।
उनका श्रीमानलाई निकै औषधी उपचार गर्दा पनि रोग निको भएन । रोग कै कारण २ वर्षअघि उनको मृत्यु भयो ।अलि अलि भएको सम्पत्ति पनि औषधी उपचारमा खर्च भयो । न श्रीमान रहे न सम्पत्ति, उनलाई ठूलो बज्रपात पर्‍यो । श्रीमानको मृत्यु भएको ४५ दिनपछि नै ६ वर्षको छोरो लिएर उनी माईतीको शरणमा गइन् ।
‘माइतमा वुवाको आम्दानीको श्रोत छैन । मसहित ३ दिदी वहिनीको विहे भैसक्यो । दाजुभाई छैनन्, त्यसैले विरामी आमाको हेरचाह गर्न र औषधी उपचारका लागि खर्च जोहो गर्न पनि मैले यो काम गर्नु जरुरी थियो, गरें र सफल पनि भइरहेकी छु ’ उनले भनिन् ।
घर परिवार धान्ने काम पुरुषको मात्रै हो भन्ने मानसकिता पछिल्लो समय धेरै हदसम्म हटेको छ । तैपनि समाजमा कतिपय पुरुषले मात्रै गर्दै आएका काम महिलाले गर्न सक्दैनन् र गर्नहुन्न भन्ने मानसकिता रहेको छ । यस्तो मानसिकतालाई महिलाले विस्तारै चिर्न सफल भएका छन् ।